Chitsauko China | Faraitose's Blog
Kunze kwezvatareva kare zvinodikana kuti, maererano nekurova kunoita mwoyo, tiongororewo mashandiri emaauricles.
Ngati yeukei zvakarehwa naKaspa Bauhin na Zhini Riolan, varume vakadzidza chaizvo uye mazvikokota pamaumbirwo emuviri wemunhu; vakati ukanyatso tarisisa marovero anoita mwoyo pamhuka mhenyu yakavhiiwa, unoona kuti kurova kwemwoyo kune zvinhu zvina zvakasiyana munguva nenzvimbo zvirikuitika: zviviri kumaauricle, zvina kumaventricle. Tino zvikudza zvedu zvinoreva varume ava vanemukurumbira, asi kurova kwemwoyo kune musiyano wenzvimbo pana asi munguva kunosiyana pairi chete. Izvi zvinoitika nekuti maauricles anogwina pamwechete, maventricles achigwinhawo pamwechete asi ari nguva yakasiyana neyemaauricles. Saka nguva iri biriviri. Izvi zvinoitika nekudai:
Pane kurova kairi kunoteedzana. Kwemaauricles nekwemaventricles anova ndivo mwoyo chaiwo. Kurova uku hakuitike pamwechete, maauricle ndiwo anotanga mwoyo wozo tevera, kurova uku kuchinyatsooneka kuti kunotanga mumaauricles uchitandarira kumaventricles. Mwoyo paunenge wava kufa kurova uku kunenge kwavakunonokera kuti kwemaauricle kwakasiyana nekwemaventricle uye panomboitakanguva maventricle asati adairira maauricle, kana hove nedzimwe mhukatonho dzinodai zvakare. Uchingunodai kufa maventricle anogona kumbochimbidza kudaira maauricle kunge ava kupepuka asi nenguva anozoita achinonokera dzamara asisa daira nemazvo, ongoita kunge kugutsirira kurova kuchinge kungotsukunya chete kana auricle rarova. Nemuitiro uyu mwoyo unobva waguma kurova maauricles achiri kuedza, zvekuti maauricle anganzi anorarama kupfuura maventricle. Ventricle rekuruboshwe ndiro rinotanga kumira kurova, roteverwa neauricle rekuruboshwe, kwozouya ventricle rekurudyi ,ndokuzoti zvino [izvi Galen akazvionerawo], auricle reridyi richirikungoedza kuramba richirova maventricle nerimwe auricle ratofa, zvekuti upenyu unganzi unobatirira kusvika kumagumo huri muauricle rerudyi. Paunenge uchifa zvawo padikinepadike, unooneka pane imwenguva uchimboedza kumuka auricle rarova kairi kana katatu iwo woti kamwechete zvinechinono chaizvo, nekusada, zvekuto gomera.
Zvikuru kuziva kuti mwoyo wese paunenge warega kurova kwango sara auricle rekurudyi chete, munwe ukaiswa paventricle unonzwa kupfura kweauricle rimwe iroro muvenricle. Tsanangudzo yacho ndiyo imweyo neyatambopa yekuti mapfuriro anoita tsingaropa kusundidzirwa kunenge kuchiitwa ropa, saizvozvo rino pinda mumwoyo nekusundidzirwa. Pakadai auricle rega richi rova umhuno hwemwoyo huka chekwa nechigero, ropa rino buda kubva muronda iri richiita zvekupfikura. Zvinozivisa kuti ropa rino pinda mumwoyo kwete nekukwezvwa nemwoyo unenge watambanuka [semvuto], asi nekusairirwa nemauricles.
Ngazvizivikanwe kuti zvese zvandinoti kurova kana kupfura, mumaauricle nemumwoyo chaiwo, kugwinha kwetsandamwoyo. Chinotanga kugwinha maauricle kwozouya mwoyo chaiwo. Maauricle anonyatsooneka kuchenuka paanenge achigwinha achirova, kunyanya ropa parinenge riri shoma [ano zara neropa kuita dura reropa kana kuti dziva reropa neropa rinofamba mumuviri richienda kumwoyo.]
Muhove nematatya nedzimwe mhuka dzine auricle imwechete, dzimwe panzvimbo ye auricle chaiyo pane rinenge dundira rizere neropa nechemuzasi memwoyo, unonyatso ona kugwina kunoita dundiro iri, richizo teverwa nemwoyo wese.
Ndinofunga kuti ndingawedzerewo pano zvimwe zvandakaonawo nekuongorora: mwoyo we nyamasasi , kana dzimwe hove, kana dzimwe mhuka [dzekupfuya], uabviswa kubva mumuviri wemhuka yacho, unotoramba uchirova pasina maauricle . Ukau cheka kuita tudimbu, tsandamwoyo yacho inotoramba ichigwinha nekuregerera zvinoreva kuti mauri mwoyo wacho kana maauricle ato regera zvao kugwinha, dumbu remwoyo rinotoramba richi rova.